Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny Dashboard amin'ny macOS Mojave | Avy amin'ny mac aho
Rehefa nandeha ny taona, ny fampiasana ary Nihena ny fiasan'ny dashboard, mahatratra ny teboka fa ny Apple mihitsy no mamono azy io amin'ny endriny macOS vaovao. Saingy, na eo aza izany, mbola afaka mahita mpampiasa be dia be izay mampiasa azy matetika isika.
Misaotra an'i Dashborad afaka miditra haingana amin'ireo widgets ahafahantsika mifandray haingana isika nefa tsy mila mankany amin'ny Launchad. Anisan'ireo widgets malaza indrindra ahitantsika ny calculer, ny mombamomba ny stock, ny fotoana, ny faritra misy ny fotoana, karohy ny boky fifandraisana ... Raha mieritreritra ianao fa afaka manandrana, dia asehonay anao Ahoana ny fomba hampiasana ny Dashboard amin'ny macOS Mojave.
Misaotra ny Mission Control, afaka mahita haingana ny varavarankely misokatra rehetra isika, ny sary kely fampiharana feno ary ny Dashboard rehetra, amin'ny fampisehoana natambatra. Raha irintsika ampandehano ny Dashboard, tsy maintsy mankany amin'ny Mission Control isika, miorina ao anatin'ny System Preferences.
Manaraka izany dia tsy maintsy apetrakao eo akaikin'ny drop-down izay mitondra ny lohateny hoe Dashboard ny totozy ary safidintsika ny fomba tiantsika hampavitrika azy: toy ny habaka na toy ny overlay. Mba tsy hidiranao amin'ny fiasan'ny Dashboard, tsy maintsy mifidy isika toy ny habakabaka.
Raha vantany vao navadika isika, raha vao ampodintsika ny Control Mission, dia hojerentsika ny fomba manoloana ny birao voalohany, mahita takelaka vaovao antsoina hoe Dashboard izahay. Amin'ny alàlan'ny fametahana azy io, dia azontsika atao ny mampiasa andian-tsarimihetsika izay afaka mifandray haingana sy mora foana.
Ahoana ny fomba famonoana ny Dashboard
Mba hamonoana ny Dashboard dia tsy maintsy manao dingana mitovy isika, fa amin'ity indray mitoraka ity dia tsy maintsy misafidy ao anatin'ny drop-down akaikin'ny lohateny Dashboard Deactivated isika. Tamin'izany fotoana izany, ny tontonana izay naseho teo anoloan'ny birao voalohany hanjavona tanteraka izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba ahafahana mampandeha ny Dashboard amin'ny macOS Mojave
Ny 2018 "MacBook Pro 15 voalohany dia hita ao amin'ilay faritra nohavaozina
Fomba hahitana ny endritsoratra ampiasain'ny tranonkala iray miaraka amin'i Mozilla Firefox